Avy amin'ny zava-maherin'ny harena dia ny fanahy kambana, ny kambana mystic ary amin'ny firaisana ara-nofo dia nahita ny tenany hafa tao anatiny. Tamin'ny alalan'ny fitiavana sy ny sorona izao no namaha zava-miafina lehibe kokoa: nahita, toy i Kristy, toy ny fanahy, tamin'ny alàlan'ny rehetra: fa I am-You-and-You-art-I.
Vol. 2 NOVAMBRA, 1906. Tsia
TOA izay asehon'ny famantarana ny zodiaka aquarius dia eo amin'ny fiaramanidina mitovy amin'ny singa (gemini), fa ny fahasamihafana amin'ny haavon'ny fampandrosoana mankany amin'ny fanatanterahana farany dia saika tsy azo resahina. Ny fahasamihafana eo amin'ny fiandohan'ny firaisana amin'ny firaisana, ao amin'ny tontolo tsy voatanisa, ary ny fahatongavan'ilay firaisana ara-tsaina mampiorina ny maha-olona ao anaty fanahy.
Ny maha-zava-dehibe dia ny fakany primordial tsy voaforona izay foto-panahy, eo am-piandohan'ny vanim-potoanan'ny fivoarana, dia miaina (homamiadana) ho fisehoana ary lasa olom-pirenena sy izao tontolo izao hita sy tsy hita maso ary endrika rehetra. Avy eo dia mandalo ny rehetra ary voavaha ihany amin'ny farany (amin'ny alàlan'ny capricorn) ao anaty akora fototra (gemini), mba ho fofonaina indray ary ho voavaha indray. Ary toy izany koa, tamin'ny fiandohan'ny fiainana an-tany, izay antsointsika hoe olombelona dia mifofofofo ho zavatra ara-panahy, dia maka endrika hita maso ary raha tsy ahatonga tsy fahalavorariana ao anatin'io fiainana io, ny zavatra noforoniny dia voavaha amin'ny alàlan'ireo fanjakana isan-karazany ho ao. ny zavatra tany am-boalohany amin'ny tontolony mba ho feon'ny rivotra mandra-pahatongan'ny tsy fahafatesan'ny fahatsiarovan-tena, ary mitambatra ary ho tonga fanahy tokana.
Rehefa mitresaka ny akora rehefa resaka ara-panahy dia miditra ao amin'ny ranomasin'ny fiainana, izay tsy hita ary tsy ho hitan'ny mason'ny vatana, fa mety ho hita eo amin'ny asany amin'ny alàlan'ny fiaramanidina ihany, izay no fiaramanidina fisainana, (leo -sagittary). Resaka ara-panahy toy ny fiainana dia mitady fitenenana foana. Miditra ao amin'ny endrika mikraoba tsy hita izy, ary mampivelatra, mampirongatra, ary manangana ny tenany sy ny endriny tsy hita maso. Izy io dia manohy mitombo sy mampivelatra endrika izay mivoatra amin'ny firaisana ara-nofo, fanehoana ny maha-vehivavy amin'ny maha-lehilahy azy. Amin'ny alàlan'ny faniriana ara-pananahana dia mivoatra hatrany amin'ny ambaratonga avo indrindra, ary amin'ny alàlan'ny fofon'aina dia tafiditra ao an-tsaina. Ny faniriana dia hijanona eo amin'ny fiaramanidina azy manokana izay ilay fiaramanidina endrika sy faniriana (virgo-scorpio), saingy amin'ny alàlan'ny eritreritra dia azo ovaina sy ovaina ary velarina.
Ny fanahy dia teny izay ampiasaina amin'ny fomba tsy manavanana ary matetika. Ny fampiasana azy dia nanondro fa kalitao tsy manam-petra ny maha-mahafeno fepetra azy ary ny alàlan'ny teny taloha na manaraka; ohatra, ny ain'izao tontolo izao, ny ain'ny biby, ny ain'olombelona, ​​ny fanahy masina, ny ain'izao tontolo izao, ny fanahy mineraly. Ny fanahy dia ao anatin'ny zavatra rehetra raha toa ny zava-drehetra dia am-panahy, fa ny zava-drehetra dia tsy tsaroana ny fisian'ny fanahy. Ny fanahy dia eo amin'ny lafiny rehetra amin'ny ambaratonga feno fa ny foto-kevitra dia vonona hiteraka sy hahatsapa izany. Raha ampiasaina am-tsaina, ny fampiasana ankapobeny sy tsy manavanana izay ampiasana ilay teny ankehitriny dia mety ho takatra miaraka amin'ny famaritana. Araka izany, amin'ny firesahana momba ny fanahy ara-batana, dia midika izany hoe atoma, hery, na singa iray amin'ny natiora isika. Amin'ny fanahy mineraly, manondro ny endrika isika, ny molekiola, na ny magnetisma izay mitazona na mampiray ny atoma na ny singa misy azy. Ny fanahy, ny mikraoba, na ny sela izay manamboatra ny hery ho lasa endrika ary manamboatra endrika hamelatra sy hitombo amin'ny endriny milamina. Miantso ny fanahin'ny biby isika, ny faniriana na angovo na afo mandrehitra, mavitrika amin'ny alàlan'ny fofonaina, izay manodidina, mitoetra, mifehy ary mandoa ary mamerina ny endriny. Ny ain'olombelona dia anarana ho an'izay ampahany na an-tsaina na isam-batan’olona na fahatsiarovan-tena hoe I-am-I foto-kevitra izay mihetsika ao amin'ny olombelona ary miady amin'ny faniriana sy ny endriny ho an'ny fifehezana sy ny fahefana. Ny fanahy masina an'izao tontolo izao dia ny saina manarona ny fisalobonana sy ny fofona ary ny fiara misy ny fisian'ny Fahalalana tsy mitombina.
Ny fanahy dia tsy zava-dehibe na dia ny fanahy aza no faran'ny farany sy fivoarana avo indrindra amin'ny akora, ny roa tonta dia mifanohitra amin'ny fiaramanidina iray ihany; ny fanahy tsy fofonaina na dia miaina amin'ny alalan'ny fofonaina aza ny fanahy amin'ny fifohazana amin'ny fiainana rehetra; ny fanahy dia tsy fiainana ary na dia mifanohitra amin'ny fiainana aza (leo-aquarius) nefa ny fanahy no foto-kevitry ny firaisana amin'ny fisehoan'ny fiainana rehetra; ny fanahy dia tsy mamorona na ny fanahy dia mifandraika amin'ny endriny rehetra ao amin'ilay misy azy sy mamindra ary hananany. Ny fanahy dia tsy firaisana ara-nofo na dia ny fanahy aza dia mampiasa ny firaisana ara-nofo ho tandindona, maha-olona, ​​ary amin'ny fisiany ho androgyne ao amin'ny olombelona tsirairay dia ahafahan'ny saina mandanjalanja sy mampitovy ny resaka fanahy amin'ny alàlan'ny firaisana ara-nofo ary mamaha izany amin'ny fanahy. Ny fanahy dia tsy faniriana, ny fanahy dia ny fitiavana tsy misy fitiavan-tena izay ny faniriana dia ny tsy misy fika, mangingina, manintona ary tsy voatazona. Ny fanahy dia tsy noheverina na dia hita taratra ao an-tsainy aza ny fanahy fa amin'ny alàlan'ny eritreritra dia atsangana ho avo kokoa ny fiainana sy ny endrika ambany kokoa. Tsy fanahy ny fanahy fa ny fanahy no fahendrena ao amin'ny isam-batan’olona izay mamela ny isam-batan’olona hamoy ny maha-izy azy ary mampivelatra ny maha-izy azy sy hamantatra ny tenany amin'ireo olona hafa rehetra ary noho izany dia hahita izany fanehoana fitiavana tonga lafatra izany.
Ny fanahy dia fitsipiky ny saina manan-tsaina izay mampiditra, mampifandray ary mampifandray ireo atiny rehetra eo amin'izao rehetra izao miaraka amin'ny atiny rehetra sy miaraka. Rehefa mampifandray sy mampifandray ny atoma sy mifandraika amin'ny fivoaran'ny fahatsiarovan-tena ny fitrandrahana mineraly, legioma, biby, ary ny fanjakan'olombelona, ​​dia mifandraika amin'ny hita maso miaraka amin'ireo fanjakana tsy hita maso, izao tontolo izao miaraka amin'izao tontolo izao ary ny tsirairay.
Satria ny fanahy maha-olona dia ny maha-olombelona ao amin'ny olombelona, ​​ny fahatsiarovan-tena mahatonga ny tontolo iray ho lasa maha-olombelona sy ilay olona tia tena. Ny fanahy dia ny fotokevitra mahatsiravina izay mitondra fampiononana ho an'ny malahelo, miala sasatra, tanjaka ho an'ny miady mafy, fahendrena ho an'ireo mahalala, ary fiadanana mangina ho an'ny hendry. Ny fanahy no foto-kevitra mahatsiaro tena rehetra, ny efitra manilin'ny fieritreretana. Ny fanahy dia mahatsapa ny zavatra rehetra fa ny fahatsapan-tena fotsiny dia mety hahatsapa tena ho ao anatiny sy ao ary ho fanahy. Ny fanahy no fitsipiky ny fitiavana iraisana izay tohizana ny zava-drehetra.
Ny fanahy dia tsy misy endrika. Mitovy amin'ny an'i Kristy sy Kristy tsy misy endrika. "Ny Kristy" dia fanahy miasa amin'ny maha-olona tonga nofo.
Tsy fantatra ny amin'ny fisian'ny fanahy, ny tsy mahalala sy ny tia tena ary ny ratsy nifady hanohitra azy na dia miady amin'ny ezaka ataon-dreniny aza ny zaza. Na izany aza, ny fanahy dia miantraika amin'izay rehetra manohitra azy toy ny reny amin'ny fahatezeran'ny fahajambana amin'ny zanany.
Rehefa soratan'ny mpankafy ny fitiavana izay mahatonga ny lehilahy na ny vehivavy hamono azy ho an'ny malalany, ny tanora sy ny tovovavy mahafaly ary mifaly amin'ny famakiana. Ny antitra taloha dia mieritreritra ny tanjaka sy ny maha-olona ny maherifon'ilay mahery fo. Na ny tanora na ny antitra dia hieritreritra sy hampifandray ny tenany amin'ny toetrany. Saingy raha manoratra momba ny fitiavana izay nanosika an'i Kristy na "mpamonjy an'izao tontolo izao" hafa rehetra ny sorona mba hanao sorona ny tenany ho an'ny malalany - ny maha-olombelona - ny zatovolahy sy ny tovovavy dia hangovitra ao an-tsaina ary hihevitra izany ho lohahevitra tokony hatao rehefa feno izy ireo , na koa rehefa sasatry ny na miaina fiainana, rehefa antomotra ny fahafatesana. Ny vahoaka taloha dia manaja sy manaja ny mpamonjy amin'ny tahotra ara-pinoana, fa na ny tanora na ny antitra dia tsy afaka mampifandray ny tenany amin'ny hetsika na ilay nanao azy, afa-tsy ny hino sy hahasoa amin'ny alàlan'ny "mpamonjy" ihany. ny fitiavana na ny fahafoizan-tena ho an'ny olon-tiana na ny reny ho an'ny zanany dia mitovy ny fitsipika, na dia nitarina tsy manam-petra aza, izay manery an'i Kristy hamoy ny toetra sy hanitatra ny maha-izy azy avy amin'ny sisin'ny tery tery voafetra maha-olona ao anatin'ny manontolo sy amin'ny maha-olombelona manontolo. Io fitiavana na fahafoizan-tena io dia tsy ao anatin'ny zavatra niainan'ny lehilahy na vehivavy tsotra, ary noho izany dia raisiny ho olona ambony sy mihoatra azy ireo izany fa tsy an'ny karazany avy. Ny karazan'izy ireo dia ny fitiavan'olombelona sy ny lehilahy ary ny ray aman-dreny ary ny zanak'izy ireo ary ny sorona atao sy ho an'ny tsirairay. Ny fahafoizan-tena dia fanahin'ny fitiavana, ary ny fitiavana dia finaritra amin'ny fanaovana sorona satria amin'ny fitiavana sorona dia mahita ny fanehoany sy ny fahasambarana tonga lafatra indrindra. Mitovy ny hevitra tsirairay, samy hafa ny tsy fitovizan'ny fitiavana sy ny reny raha toa ka i Kristy mihetsika amin'ny fomba feno, ary ny fitiavana dia feno sy lehibe kokoa.
Ho fananganana ny maha-olona, ​​I-am-I-ness, ny fampiroboroboana ny raharaha amin'ny fanjakana iray izay ahalalan'ny tenany sy ny maha-izy azy manokana ho an'ny maha-izy azy, noho izany antony izany dia namboarina ny fitiavan-tena. Rehefa tratrarina ny isam-batan’olona, ​​dia nahatanteraka ny tanjony ny fahatsapana fitiavan-tena ary tsy maintsy avela. Tsy resaka ara-panahy intsony ny resaka ara-panahy. Mampiray ao anaty singa tokana izay, efa fantatra ankehitriny toy ny I-am-You-and-You are-I. Ao ny mpamono sy ny namono olona, ​​ny mpivaro-tena sy ny vevavy, ny adala sy ny hendry dia iray ihany. Izay mahatonga azy ireo dia Kristy, fanahy.
Ny fitiavana mifehy tena dia ny fitiavana. Mandresy ny fitiavan-tena isika amin'ny fitiavana. Ny fitiavana kely, ny fitiavan'olombelona, ​​ao anatin'ny tontolo kely misy azy dia ny fananana ilay fitiavana izay Kristy, fanahy.
Ny fanahy dia nanambara ny fahatongavany teo amin'ny olona ho feon'ny fieritreretana, ny feo tokana. Ny feo tokana ao anatin'ireo feon'izao tontolo izao an'habakabaka dia manosika azy hanao fiheveran-tena tsy misy fitiavan-tena ary manaitra ao anatiny ny fiarahany amin'ny olona. Raha arahina ny feo tokana rehefa tsikaritra dia hiteny amin'ny hetsika rehetra izany; avy eo dia hanambara aminy ny tenany amin'ny alàlan'ny feon'ny zanak'olombelona ao aminy ho fanahin'olombelona, ​​firaisan-kina. Hanjary mpirahalahy izy avy eo, ary hahafantatra ny tenako hoe I am-You-and-You-mahalala aho, lasa "mpamonjy an'izao tontolo izao" ary ho tonga iray miaraka.
Ny fahatsiarovan-tena momba ny fanahy dia tsy maintsy atao raha ny isam-batan’olona dia miaina ao anaty vatan'olombelona iray ary miaina ao amin'ity tontolo ara-batana ity. Tsy azo atao alohan'ny fiterahana na aorian'ny fahafatesany na ivelan'ny vatana ara-batana. Tsy maintsy atao ao anatin ny vatana izany. Ny olona iray dia tokony hahatsapa saina ny olona ao anaty vatany iray alohan'ny hahalalana ny tena ivelan'ny vatana ara-batana. Izany dia nantsoina tao amin'ny famoahan-dahatsoratra momba ny olan'ny "firaisana ara-nofo" (libra). (Jereo ny The Teny, volume 2, No. 1, p. 4.)
Voalazan'ny mpampianatra velona mandrakizay, ary ao amin'ny soratra masina sasany, fa ny sitrapon'ny fanahy dia misafidy ny hanambara ny tenany izy. Midika izany fa ao amin'ireo izay mahafeno fepetra amin'ny fahasalamana ara-batana, ara-tsaina, ara-tsaina, ary ara-panahy, ary amin'ny fotoana mety, dia ho lasa fantatra ny fanambarana, ny fahazavana, ny fahaterahana vaovao, ny batisa, na ny fahazavana. Miaina ao ilay lehilahy avy eo ary mahatsapa fiainana vaovao sy tena asany, ary manana anarana vaovao. Ary rehefa vita batemy Jesosy, izany hoe rehefa tonga nofo ny saina avy amin'Andriamanitra, dia tonga izy ary nantsoina hoe Kristy; avy eo dia nanomboka ny asany. Toy izany koa i Gautama raha misaintsaina eo ambanin'ny hazo Bo, ilay hazo masina ao amin'ny vatana ara-batana. Izany hoe misy fanahy iray miseho ao anatiny ary izy dia nantsoina hoeBuddha, izay ny mazava ary nanomboka ny ministerany izy.
Amin'ny fotoana sasany eo amin'ny fiainan'ny isam-batan'olona iray dia avy ao anaty fanitarana fahatsiarovan-tena, avy amin'ny raharaha kely an'ny fiainana eto an-tany ao anatin'ny tontolon'ny asa-andro mankany amin'ny tontolo anatiny izay mahita, manodidina, manohana ary manitatra mihoatra ny ity tontolo kely mahantra ity. Amin'ny fofonaina, ao anaty tselatra iray tampoka dia mijanona ny fotoana ary misokatra miala ao anatiny ity tontolo anatiny ity. Mamirapiratra kokoa noho ny masoandro marobe izy io dia misokatra amin'ny taratra tsy mazava ary tsy mandrehitra. Izao tontolo izao miaraka amoron-dranomasina tsy misy miadana, kaontinanta be dia be, varotra mihazakazaka, ary karazam-pivoriana marobe maro loko; ny tany lemaka manirery, zaridaina mavokely, tendrombohitra misy feony mitete-ririnina; ny diany, ny vorona, ny bibi-dia sy ny olona; ny efitranony amin'ny siansa, ny fahafinaretana, ny fanompoana; ny endrik-javatra rehetra eto ambonin'ny tany sy ny tany ary ny volana ary ny kintana, dia miova ary lasa be voninahitra ary avy amin'Andriamanitra amin'ny hatsaran-toetra avy any an-danitra sy ny hazavana tsy misy alokaloka izay mamirapiratra manerana ny tontolo anatiny. Avy eo dia nanjavona ny fitiavana sy ny hery ary ny fahendrena izay nanjaka tao amin'ny fanjakan'ny fanahy, tao anaty sy ivelan'ny fotoana, ny vanimpotoan'ny hatezerana, fankahalana, fialonana, zava-poana. Ny olona iray izay nahatsiaro tena dia mihemotra amin'ny fotoana tsy maharitra hatramin'ny farany. Fa izy dia nahita ny mazava, efa nahatsapa ny hery, dia naheno ny feo izy. Ary na dia tsy navotsotra aza izy dia tsy nihomehy intsony sy nitomany ary mifikitra amin'ny lakrimon'ny vy na dia mety hizaka azy aza izy. Avy eo dia niaina izy izao mba hamadika ny tsilo sy toerana mangadihady amin'ny tany ho tonga kijana maitso sy saha; hisintona avy ao amin'ny maizina ny fisompirana, mikorontana, mandady ary manofana azy ireo hijoro ary haharitra ny mazava; manampy ny moana izay midina sy mandeha amin'ny tanana sy tongotra eto an-tany hijoro mahitsy ary miakatra ho eo amin'ny hazavana; miaina ny hiran'ny fiainana eto amin'izao tontolo izao; hanamaivana ny enta-mavesatra; hamiratra ao am-pon'ireo maniry, ny afon'ny sorona izay fitiavana ny fanahy; ny hanome ho an'ireo mpizara fotoana izay mihira ny hiram-piraingoana amin'ny maranitra sy ny fisarahana amin'ny fanaintainana sy ny fahafinaretana, ary izay mametra-tena amin'ny fantsom-by, ny hiram-piavin'ny fanahy vaovao: ny fitiavana ny fahafoizan-tena. . Noho izany dia miaina ny fanampiana ny hafa izy; ary raha mbola miaina, mihetsika ary mitia amin'ny fahanginana izy dia maharesy ny fiainana amin'ny eritreritra, mamorona amin'ny fahalalana, firaisana amin'ny fahendrena, faniriana amin'ny sitrapo ary hahazoana fahendrena, dia mahafoy ny tenany ao amin'ny sorona fitiavana izy ary miala amin'ny fiainany manokana ho amin'ny fiainan'ny olombelona rehetra.
Aorian'ny fahitana voalohany ny hazavana ary nahatsapa ny hery sy maheno ny feo dia tsy hiditra ao anatin'ny fanjakan'ny fanahy iray intsony. Hiaina fiainana an-tany maro izy, ary amin'ny fiainana tsirairay dia handeha am-pahanginana sy tsy fantatra amin'ny lalan'ny endrika mandra-pandraisany ny asany tsy misy fitiavan-tena ka hivoaka indray ny fanjakan'ny fanahy, rehefa hahazo indray ny fitiavana tsy misy fitiavan-tena izy, ny hery velona , ary ny fahendrena mangina. Avy eo izy dia hanaraka ireo tsy misy maty izay efa nandalo teo amin'ny lalan'ny tsy fahatsiarovan-tena.